Erayada Barnaamijyada Weyn ama Weedhaha | Martech Zone
Jimco, Janaayo 26, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Aniga oo lashaqeynaya barnaamijiyeyaal qaas ah, inta badan waxaan isku arkaa kulammo lala yeesho naqshadayaasha, hogaamiyaasha iyo horumariyeyaasha kuwaas oo (waxaan u maleynayaa) inay jecel yihiin inay halkaas ku tuuraan ereyo waaweyn ama weedho halkaas si ay isugu dayaan oo ay uga baqaan Maareeyayaasha Alaabada ama macaamiishooda.
Waa mid ka mid ah waxyaabaha barnaamijyadu jecel yihiin inay qabtaan. Waa kuwan toban iyaga ka mid ah oo leh sharaxaad aad u fudud (taas oo shaki la'aan soo jiidan doonta carada kuwa horumariya meel kasta oo aan khawano eraybixintooda illaa ay sarbeebtayda gawaarida):
Abstraction - tani waxay qaadaysaa hawl ama hawl adag oo asal ahaan u kala jebinaysa si macquul ah… ama kala sareyn (A waxaa iska leh B, Bna C, iwm.) Ama muuqaal ahaan ama shaqeyn ahaan (midab, cabir, culeys, iwm.). Abstraction wuxuu ka dhigayaa barnaamijka ujeedo-ujeedo barnaamijku mid sahlan iyadoo loo abaabulayo shaqeynta si macquul ah. Si aan u dhiso gaarigeyga, waxaan dhisayaa jir, matoor, iyo jir si gooni ah.
Hoos udhac - tani macnaheedu waa inay jiraan koodh duug ah oo nidaamka ku jira oo sii jiri kara laakiin u baahan in la joojiyo. Marka koodhku duudduubto, barnaamijyayaashu tixraac kumbuyuutarka ama ma isticmaalaan lambarka cusub illaa dhammaan tixraacyadu ka tagayaan duuggii hore, oo ay ahayd in laga saaro. Mararka qaarkood, haddii ay tahay muuqaal tagaya, waad ku hayn kartaa in muddo ah adoo u digaya isticmaaleyaashaada inay sii soconayso. Waxaan helaa nidaam rikoodh cusub ah oo leh fiilooyin cusub laakiin waxaan ka tagayaa fiilooyinkii hore oo aanan isticmaalin.
Kaadida - tani waa habka lagu abaabulo howlahaaga barnaamijka waalidka dhexdiisa marka howshu aysan gaarin qaybaha kale ee nidaamka. Haddii aad haysato malaayiin shaqooyin ah, waxaad dooneysaa inaad si hufan u abaabusho ugana shaqeyso meelaha ay ka shaqeeyaan halkii laga heli lahaa adduunka. Waxaan dhigay mashiinka mashiinka caawiya qolka mashiinka filter Saliida saliida ma dhigo kursiga dambe.
Dhaxalka - tani waa awoodda lagu qaato astaamaha qayb kale oo koodh guud ah (fasal) si dib loogu isticmaalo adeegyo cusub iyada oo aan dib loo qorin. Dhaxalku waa dhaqan kale oo wanaagsan oo ku wajahan horumarinta. Kursigayga gaariga waxaa loo isticmaali karaa in lagu qaado cunug ama qof weyn - qofkastoo ku fadhiista.
Caadi ahaan - kani waa habka loo abaabulo xog wax ku oolnimada keydka xogta iyadoo la dhisayo tixraacyo. Tusaale ahaan haddii aan duubto nalalka taraafikada maalintii oo dhan… casaan, jaalle iyo cagaar. Halkii aan ku qori lahaa diiwaan kasta oo leh casaan, jaalle, iyo cagaar - waxaan qoraa 1, 2, iyo 3 ka dibna samee miis kale halka 1 = casaan, 2 = jaalle iyo 3 = cagaar. Sidan ayaan kaliya ku duubtaa casaan, jaalle iyo cagaar hal mar. Mid kasta oo ka mid ah albaabbada gaarigeygu wuxuu leeyahay isla albaabka albaabkiisa. Hal gacan, oo loo adeegsado 4 goobood oo kala duwan halkii laga isticmaali lahaa 4 gacan qabsi oo kala duwan.
Ujeeddo Ujeeddo - luqadaha casriga ah ee barnaamijyada, tani waa qaab naqshadeyn ah oo kuu oggolaanaya inaad ku qorto lambar gaar ah qaybo, shaqeysiin, ka dibna dib u isticmaasho. Tusaale ahaan haddii aan doonayo inaan hubiyo cinwaan emayl si sax ah loo dhisay. Waan dhisi karaa shaqada hal mar, ka dibna u adeegsan karaa meeshii aan u baahdo codsigeyga. Gaadhigaygu wuxuu leeyahay 18 ims geesood oo loogu isticmaali karo gawaarida kale isla shirkadda ama soosaarayaasha kale.
Polymorphism - Kani waa adag tahay in la sharraxo, laakiin asal ahaan waa awoodda samaynta koodh si firfircoon loogu isticmaali karo xaaladaha kale. Si kale haddii loo dhigo, waxay ka dhaxli kartaa shaqooyin gaar ah oo firfircoon qaab fudud oo loo tixraaco. Tani waa hab wax ku ool ah oo horumarineed. Waxaan u isticmaali karaa mishiinka korontada si aan taleefankayga ugu soo shubo ama ugu shubo casiir taangigayga.
Dib u noqoshada - kani waa hab meesha koodhku tixraaco laftiisa. Mararka qaarkood, waa mid wax ku ool ah oo ula kac ah, laakiin waqtiyo kale waxay ku kici kartaa inay ku wareejiso codsiyadaada xakamaynta. Waxaan gujinayaa raadinta rikoodhada gaadhigayga waxayna ku wareegaysaa idaacadaha. Marnaba ma dhammaato, way sii socotaa.
Diidmada - tani waa habka dib-u-qorista koodhka si ay u fududaato in la raaco ama si fiican loo abaabulo laakiin qasab maaha in lagu daro waxqabad dheeri ah. Waxaan dib u dhisaa matoorkeyga.
Qaab-dhismeedka Jihaynta Adeegga (SOA) - qaado barnaamijyada u janjeera shayga una adeegso nidaamyo waaweyn oo aad ka heli karto nidaamyo dhan oo qabta shaqooyinka qaarkood. Waxaad yeelan kartaa nidaam maareynta xiriirka macaamiisha oo ka hadlaya nidaamka ecommerce ee ka hadlaya nidaamka maraakiibta, iwm. Waxaan jiidayaa trailer ah gaarigayga si aan alaab uga raro hal meel oo aan u aado meel kale. Waxaan u isticmaalaa xirxirida trailor (XML) si aan ugu xiro iyaga.
Waxaan garwaaqsaday in sarbeebteydu aysan had iyo jeer ku fiicneyn bartilmaameedka. Waxaan rajeynayaa inay wax yar caawiyeen, in kastoo!
Waxoogaa talo ah markaad maqasho ereyadan kulankaaga dambe ee aad la yeelanayso horumariye… dib ha ugu laaban kursigaaga oo kor ha u eegin Wikipedia, way daawan doonaan. Ha liicin, way weerari doonaan. Waa tan waxa la sameeyo… ka fakar daaqadda sidii aad u malaynayso inaad qoto dheer ku jirto ka dibna dib ugu fiirso muuqaalka baaritaanka ama xoqin garkaaga. Sug inta ay la socdaan caddayntooda oo ay la socdaan macluumaad dheeraad ah.
Watching Way daawanayaan.
LOL runti waad qodbay Doug 🙂 Ma waxaad isku dayeysaa inaad naga saarto ganacsiga? Waad ogtahay nacalad si fiican baan bangiyada ugu leenahay fikradahaas oo aan la fahmin sidaas darteedna aan ula macaamilno macaamiisha. Hadda waxaan ogaaneynaa qaab aan ku afuufi karno dhinacooda isku darka ereyadaas buzzwords si ay u abuuraan hal weedh oo weyn oo u dhici kara sidan:
Hagaag waad ogtahay muuqaalka aad iskudayeyso inaad dhex dhigto laga soo saari karo walxo badan oo soo koobaya waxqabadka isla markaana kula xiriiri kara qaab dhismeedka jihada adeegga.
Mahadsanid, AL! Hadalkaagu waa mid qurux badan.
Mahadsanid. Waxaan rajeynayaa inaad iibsatay!
Waxaan eegay daaqadda anigoo ka fikiraya. 🙂
Jan 27, 2007 saacadu markay ahayd 2:58 PM
Ahaanshaha horumariye softiweer ah waan qaddarin karaa qoraalkan. Kuli kuligeen xumaan ma nihin 😉 waligey maan bambooyi lahayn dadka leh teknoolojiyada noocaas ah 🙂
Aan isku dayo oo aan ka fikiro ereyo dheeri ah adiga for.
Jan 27, 2007 saacadu markay ahayd 3:24 PM
Dhammaantiin baashaal wanaagsan, Dean! Waad ku mahadsan tahay joojinta! 🙂